Mogadishu Journal » 2019 » February » 10
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay furitaanka Shir Madaxeedka Midowga Afrika oo sannadkan diirrada lagu saarayo arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha Afrika ayaa sheegay in madaxda looga baahan...
Mjournal :-Shir madaxeedkii 32-aad ee hogaamiyayaasha qaaradda Afrika ayaa maanta ka furmay magaalada Addis Ababa ee xarunta Midowga Afrika. Qaxootiga iyo dadka gudaha dalkooda ku barakacay ayaa ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee ay madaxdu ka doodi doonaan muddada uu shirka...
Mjournal :-Baarlamaanka Puntland oo maanta yeeshay fadhi ay soo xaadireen 53 Xildhibaan ayaa ka doodday qaabka loo ansixinayo golaha wasiirrada cusub ee la filayo inuu dhawaan magacaabo madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni. Xildhibaannada waxaa ay si adag uga doodden in...
Mjournal :-Wasiirka Beeraha iyo Waraabka Soomaaliya Mudane Siciid Xuseen Ciid ayaa dalka Turkiga gaar ahaan Magaalada Izmir kulan kula yeeshay Wasiirka Beeraha iyo Cuntada dalkaasi Mudane Bekir Pakdemirli, waxeyna ka wada hadleen arrimo badan oo quseeya labada wasaaradood....
Mjournal :-Koox hubeysan ayaa toogasho ku dishey sarkaal ka tirsan ciidamada Booliska Soomaaliyeed xaafad ka mid ah degmada Hodon ee magaalada Muqdisho. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in kooxda ka dambeysay dilkan ay saarnaayeen gaari yar iyagoo toogasho ku diley sarkaalka oo ku...
Militeriga dalka Chad oo gacanta ku dhigay in ka badan 250 dagaalyahan
Mjournal :-Milateriga dalka Chad ayaa sheegay inuu gacanta ku dhigay in ka badan 250 dagaalyahan oo fallaago ah, ka dib hawlgal uu ku beegsaday Kooxo doonay inay dalkaasi kaga soo tallaabaan xuduudda Liibiya. War qoraal ah oo ka soo baxay milateriga ayaa lagu sheegay in tiradaasi...
Mjournal :-Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Addis Ababa shir-doceed kula yeeshay Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Mudane Antonio Guiteres, waxayna ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa wada shaqeynta Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo...